Ukubuyiswa koKhenketho kwiRiphabhlikhi yaseDominican emva kwesoyikiso esibulalayo kubakhenkethi baseMelika
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukuhamba ngeshishini » Ukubuyiswa koKhenketho kwiRiphabhlikhi yaseDominican emva kwesoyikiso esibulalayo kubakhenkethi baseMelika
Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeRiphabhlikhi yaseDominican • Iindaba zikaRhulumente • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Ingxelo ibonisa ukuba ukwehla kokubhukisha kunye nokutsiba ekurhoxisweni kwenqwelomoya kwiRiphabhlikhi yaseDominican kuyachacha. Ukuwa kweshishini lokhenketho kwiRiphabhlikhi yaseDominican kungqinelane nenani labakhenkethi ababandezeleka ngokusweleka okungalindelekanga I-RIU Ibhotwe ePunta Kana kwaye IHardrock Ihotele kunye neCasino Punta Kana ngoMeyi nangoJuni kulo nyaka.
Ukusuka kwi-1st NgoJuni ukuya kwi-2nd Kwinyanga kaJulayi, ukubhukisha ngoJulayi nango-Agasti ukusuka e-USA ukuya kwiRiphabhlikhi yaseDominican kwehle nge-84.4% xa kuthelekiswa nexesha elilinganayo ngo-2018. Nangona kunjalo, idatha yemihla ngemihla ibonisa ukuba ukubhukisha kwehla ngoJuni 19th, Kwiintsuku ezimbini emva kokubhubha kukaVittorio Caruso kwaye baphinde bagqithisa ukurhoxiswa kwakhona ngoJuni 26th. Kwiinyanga ezimbini ngaphambi kokubhubha nge-30th Ngomhla ka-Meyi kaNathaniel Holmes kunye noSuku lukaCynthia, ukubhukisha bekunyukile nge-2.8%.
Ukwehla kokubhukisha kwiRiphabhlikhi yaseDominican kwahlawulwa kukunyuka kokubhukisha kwezinye iindawo zeCaribbean, ngakumbi iJamaica, iBahamas, neAruba. Nangona kunjalo, ngokubuyela kwimeko yokubhukisha iRiphabhlikhi yaseDominican, ukwanda komdla kwezi ziqithi kuye kwehla.
(Kubalwa ngevolumu yokubhukisha)
1st Epreli - 31st UCanzibe
1st - 16th Isilimela (qala usasazo olubanzi lweendaba)
17th - 25th Isilimela (ixesha elilandela ukusweleka kokugqibela)
26th NgoJuni-2nd EyeKhala(ukubhukisha kwakhona kudlula ukurhoxiswa)
Ingcali ithe, “Ukusweleka kwabemi baseMelika okwenzeke ngasekupheleni kukaCanzibe nasekuqaleni kukaJuni kubangele umdla omkhulu kwimithombo yeendaba kunye nentelekelelo. Olo hlobo lokuqwalaselwa lwaluza kubabeka kude abanye abakhenkethi kwaye inene yile nto siyibonileyo. Ndixolile kakhulu kwiRiphabhlikhi yaseDominican ukuba ubunzima bokuzithemba bubonakala buyehla kwaye ndinethemba lokuba iya kuba yeyokwexeshana, ngakumbi ukuba akusekho kufa kwaye ukuba uphando lwangoku lwe-FBI lumisela unobangela ocacileyo wokufa sihlandlo ngasinye singekho nobangela oyingozi. ”
I-eTN inike ingxelo ebanzi malunga nokhuseleko nokhuseleko e-Dominican Republic
Umthombo: ForwardKeys on ilizwe lasedominic